आफ्नो पाखुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर अंकित ट्याटु खोपाउने यी युवा को हुन् ? – Tufan Media News
आफ्नो पाखुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर अंकित ट्याटु खोपाउने यी युवा को हुन् ?
५ माघ २०७७, सोमबार १५:३८
काठमाडौँको कालीमाटीको ट्याटु सेन्टरमा गएर प्रधानमन्त्रीको तस्बीरको ट्याटु खोपेको उनको भनाई छ । रानाले प्रधानमन्त्रीमाथि भैरहेको चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी विरूद्ध डटेर लड्न प्रधानमन्त्रीलाइ साहस प्राप्त होस भन्ने हेतुले आफूले ट्याटु खोपेको बताए ।
उनले विकासको मुल फुटाउने काम गरेका ओलीलाइ नै काम गर्न नदिएर अन्य नेताहरूले गम्भीर गल्ती गरेको बताए ।
बिजुली र धारामा पानी
बालेन शाहलाई झाँक्रीको आग्रहः